Nezvedu - Zhoushan Willman Machinery Technology Co., Ltd.
ZHOUSHANIyo kambani Willman Machinery Technology Co., Ltd.
Zhoushan willman muchina tekinoroji Co, Ltd inyanzvi yekugadzira bhizinesi repamusoro-tec michina, inobatanidza kutsvagisa nekusimudzira, dhizaini, kugadzira, kutengesa uye sevhisi.Isu takasarudzika muchikafu chemumagaba uye chinwiwa canning machienry uye yemvura nitrogen dosing muchina unosanganisira aseptic liquid dosing muchina uye zvigadzirwa zvechikafu zvekuona muchina senge vacuum yekutarisa, musoro nzvimbo yekutarisa ect.
Chikwata chedu chine hunyanzvi chinokupa iwe basa rehunyanzvi kusanganisira dhizaini dhizaini.Kuomerera pakuchengetedza simba, kuchengetedza kwevashandi, uye kuwedzera kwehuwandu, tinobhadhara zvakanyanya kunaka kwezvigadzirwa zvedu.
Willman Machinery inyanzvi yekugadzira chikafu chemumagaba uye chinwiwa muchina yakavambwa muna 2014 nechinangwa chekupa michina yakanakisa muindasitiri yechikafu nemitengo yemakwikwi.Kambani yedu yakatanga neLN2 dosing muchina uye zvimwe zvakapedzwa kuona zvigadzirwa kana kuongorora michina.
Nekuzvipira muR&D uye hunyanzvi hwekambani, tawana budiriro nyowani uye takawedzera kune zvimwe zvigadzirwa mumashini ekugadzira chikafu zvichibva pane yedu yakapfuma ruzivo muindasitiri yechikafu.
Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira muchina wekuona.Nekuda kwemusika kudiwa kwakanyanya kwezvigadzirwa pasherufu, muchina wekuona unopa vatengi 'kukurumidza uye kuona chaiko kuti ipe vimbiso yemhando yechigadzirwa chevatengi.
Chikafu chemumagaba uye chinwiwa kuzadza uye kusona, chikafu chisati chagadzirisa muchina senge kugeza, blanching mahcine ect.
Kuwedzera kune imwechete muchina unit, kambani inopawo yakazara yekugadzira mutsara mhinduro kune vatengi vedu.
Kugadzira michina mitsva kana kuvandudza michina iripo zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, takahwina mukurumbira wakanaka kubva kune vatengi vedu.
Willman Machinery kambani yakazvipira kugadzira mhando muchina uye kupa kugutsikana kurongedza mahcinery uye sevhisi kune vatengi vese kunyangwe isu tichienderera mberi nekuvandudza mukugadzira uye manejimendi.
Isu tinotenda kuti hutsva ndiyo kiyi yekubudirira kwedu.Kuburikidza nekuzvipira kwakasimba mukutsvagisa nekusimudzira, tinopa vatengi vedu mhinduro dzepamusoro dzinowedzera huwandu hwekugadzira, kunatsiridza kuvimbika kwemutoro uye kuderedza mari yekushandisa.
Isu tinovavarira kupa hunyanzvi mune zvese zvatinoita nekuvaka hukama hwakasimba uye hunogara nevatengi vedu.
Yakanatsa zvigadzirwa zvedu zviripo uye kugadzira zvitsva nguva nenguva kutora mukana wekuvandudza matekinoroji kusangana nevatengi vedu zvinogara zvichichinja zvinodiwa.
Aseptic kugadzirisa mune chikafu uye bevera ...
eco-ushamwari kurongedza-aluminum bott...
2021 Mamiriro eIndasitiri Yechinwiwa: ...
WILLMAN COMPANY INOSHUVA VESE VAFARO MID-AU...
Tifonere Iye Zvino:008618042297890